SAWIRRO: Fadeexad soo wajahday DF & Ciidamo mushaar la’aan ka gadoodsan oo ka soo baxay furumaha dagaalka – War La Helaa Talo La Helaa
Ciidamo katirsan Milateriga Soomaaliya oo ku sugan furumaha dagaalka degaano iyo degmooyin katirsan Gobalka Shabeelaha Hoose ayaa ka cabanaya mushaar la’aan iyo garaaamkii ay dowladda ku lahaayeen oo laga goostay.
Qaar kamid ah Ciidamadaan ayaa sheegay in mudo 4 bil ah aysan qaadan wax mushaar ah, hadana laga goostay garaamkii ama raashinkii ay ku lahaayeen dowladda.
Askartaan ayaa sheegay in ay ka soo baxayaan furamaha dagaalka maadaama ay waayeen mushaarkii iyo Cuntadii ay cuni lahaayeen islamarkaana aysan raashin la’aan iyo lacag la’aan ku sii jiri Karin aagga hore ee dagaalka.
Sidoo kale qaar kamid ah Ciidamadaan katirsan Milateriga Soomaaliya ayaa sheegay in guryihii laga soo saaray carruurtii ay dhaleen kadib markii ay bixin waayeen kirada guriga, sidoo kale waxay sheegayn in biilkii laga goostay carruurtooda arimahaas oo dhan ay sababayaan in ay ka soo baxaan aagga hore hadii aysan dowladda bixin mushaaraadka Ciidamada Dowladda.
Ciidamadaan ku hanjabay in ay ka soo baxayaan furamaha dagaalka ayaa ku sugan laga bilaabo duleedka magaalada Muqdisho ilaa degaanada fog ee Shabeelaha Hoose, qaarkood waxay dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab ay ka bilaabeen dhabarka dambe ee Madaxtooyada Soomaaliya waxayna ku waayeen saaxiibo badan halka qaar kalane xubnahoodii muhiimka ahaa ay ku waayeen.
Dowladda Soomaaliya ilaa hadda kama jawaabin qayl dhaanta iyo cabashada ka soo baxaysa Ciidamada Soomaaliya. Dad badan ayaa ku taliyay in mushaaraadka Ciidamada oo aan ka badneen 100$ ay dowladda bixiso si amniga loo xaqiijiyo.
53499934 604374989989249 9222068084783710208 N
54258238 604375023322579 7670451659511693312 N
54346744 604375039989244 3735083841853849600 N